Ubambiswano kurhulumente waseNigeria kunye ne-UNWTO, i-CNN phantsi komlilo ovela kubachaphazelekayo kwezokhenketho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Tourism » Ubambiswano kurhulumente waseNigeria kunye ne-UNWTO, CNN phantsi komlilo ovela kubachaphazelekayo kwezokhenketho
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukwaphula iNigeria News • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Ubambiswano kurhulumente waseNigeria kunye ne-UNWTO, CNN phantsi komlilo ovela kubachaphazelekayo kwezokhenketho
Julayi 17, 2017
Abathathi-nxaxheba abaququzelela imibutho yabucala yezokhenketho baye basabela ngomsindo kwisibhengezo esenziwe kutshanje ngu-Mphathiswa Wezolwazi neNkcubeko, u-Alhaji Lai Mohammed sokuba Urhulumente wase-Nigeria wase-Nigeria uza kungena kwintsebenziswano kathathu ne-CNN kunye ne-United Nations World Tourism Organisation [UNWTO] kwi ukukhulisa ishishini lokuyila eNigeria, kusetyenziswa ishishini lefilimu njengepivot.
Owokuqala ukusabela yayingu-Ikechi Uko, iGosa eliyiNtloko lesiGqeba, i-Akwaaba Travel Market, eNtshona Afrika umboniso omkhulu wohambo nokhenketho, owathi “ndiyamangaliswa kukuba ubuphathiswa bunokuba nengxoxo ne-UNWTO ngaphandle kokungeniswa kwicandelo labucala lezokhenketho; kuthathelwa ingqalelo amava ecandelo labucala ekujonganeni ne-arhente ye-UN, ngakumbi kwisiCwangciso esiyiNtloko sezoKhenketho esingazange sisebenze ”.
Ethetha kwisiseko sakhe eKaduna, Malan Kabir, uMongameli, uMbutho wabaSebenzi bezoKhenketho eNigeria [i-ATPN], uthe urhulumente akaqondi kakuhle ukuba zeziphi ezokhenketho kwaye ungazenza njani ukuba zisebenze.
"Ukusuka kwiindlela kunye nendlela abeziphethe ngayo iinkampani zabucala kwezokhenketho ngaphambili, icebisa kum ukuba iinkokheli zangaphambili zecandelo labucala lezokhenketho ziye zasilela ukucacisa kurhulumente ngendlela elisebenza ngayo eli shishini, okanye mhlawumbi babenxibelelana noluntu icandelo lezibonelelo zabo buqu.
“Enyanisweni akukho kuqhubeka, kuba umgcini mncinci wayezakufunda kwezi ntsingiselo,” utshilo.
U-Kabir uqukumbele ngelithi, wonke umphathiswa okanye umlawuli jikelele uya kuhlala efuna ukuqala izinto zakhe kwaye ekugqibeleni, akukho nto ifezekileyo.
Kwelakhe icala, uVincent Ugbor, uMongameli, uMbutho weeNkonzo zabaQeshi baseNigeria [HOPESEA], uthe kulihlazo elikhulu kwicandelo labucala labakhenkethi ukuba lingaqhutywa, iUgbor ke, icebise ukuba makuthunyelwe ileta yoqhankqalazo. umphathiswa kwaye kunokwenzeka ukuba kubambela-Mongameli, uNjingalwazi Yemi Osinbajo.
U-Lanre Owoseyin, uMongameli, uMbutho weehotele zaseNigeria [NHA] uswayipha iinkokheli zangaphambili zeFederal of Tourism Associations of Nigeria [FTAN], umbrella wecandelo labucala, ubatyhola ngokungabinantlonelo kurhulumente nakwiarhente zakhe.
U-Owoseyin uqaphele ukuba ngaphandle kwale ngxaki ikhoyo, ubuphathiswa bexesha elidlulileyo nabo bayihlutha icandelo ngokuzisa i-technocrat enye kwikomiti yezobuchwephesha kwiKomiti yesiCwangciso sezoKhenketho eshiyiweyo, umgaqo-nkqubo obalulekileyo othi ukuba uchazwe kakuhle ungabeka isiseko esihle secandelo.
"Kwakhona, umphathiswa uye wacetyiswa kakubi ngokukhetha i-Creative Industry kunye ne-Nollywood shenanigans eyandulela eyakhe yasebenza kwaye zange asebenze", utshilo.
U-Owoseyin wakhalaza esithi, ingaba iNigeria iyakuthengisa okanye ikhuthaze ntoni nge-CNN, ngaba yimingxunya yeembiza ezindleleni zethu, ubumnyama obungagungqiyo kwilizwe liphela okanye iindawo ezinomtsalane ezingaphuhliswanga; Njengo-Obudu noTinapa bonke belahliwe, wabuza.
U-Nkereuwem Onung, uMongameli, uMbutho weSizwe wabaqhubi boKhenketho [NATOP], ethetha egameni lombutho wakhe uthe uMphathiswa noMphathiswa bacinga ukuba xa bethetha ngamagama afana ne-Cable Network News [CNN] kunye ne-United Nations World Tourism Organisation [UNWTO] Icandelo labucala lokhenketho liza kuthathwa.
Uye wongeza wathi akunakwenzeka ukufezekisa iziphumo kulo naliphi na icandelo lezoqoqosho, ngakumbi ishishini leenkonzo njengokhenketho ngaphandle kokubandakanyeka kwabasebenza kwicandelo labucala.
"Ngaphandle kwabasebenzi bezokhenketho, iinzame ziya kuba lilize" uqukumbele u-Onung.
U-Bankole, uBernard, uMongameli, uMbutho weSizwe wase-Nigeria kwii-Arhente zoKhenketho [NANTA], uthe akayazi kwaye iyakuba yinto engalunganga ukuba kunjalo.
U-Bernard uthe ukuba ilizwe liza kuqalisa ngokwazisa kwilizwe jikelele; ukusebenzisa iCandelo loBugcisa, iNkcubeko kunye ne-Nollywood njengoko isebe limiselwe ukuba lenze, oko kusengenziwa ngegalelo elivela kwicandelo labucala lokhenketho.
Kwelakhe icala, uRabo Saleh, uMongameli, uManyano lweMibutho yoKhenketho eNigeria [FTAN], umbutho weambrela kwicandelo labucala lezokhenketho eNigeria uthe urhulumente akakwazi ukuqhuba ukhenketho ngaphandle kwecandelo labucala.
Ngokutsho kwakhe, icandelo labucala lelona liqhuba ishishini, ngelixa urhulumente eyinakekela imigaqo-nkqubo kwaye ebonelela ngendawo evumayo yokhenketho ukuba ichume.
Utshilo ukuba ayikashiywa lixesha ukuzisa icandelo labucala kwingxoxo ngoku ukunqanda iimpazamo zexesha elidlulileyo.
Umphathiswa ubhengeze ubuhlakani eLagos ngoMvulo we-10 kaJulayi, kwiNdawo yokuHamba kweShishini lobuGcisa, esithi ishishini lemiboniso bhanyabhanya lizakusetyenziswa ”njengelensi ilizwe eliya kuthi liphumeze imiba eyahlukeneyo yeNkcubeko, uKhenketho neendawo ezifanayo zaseNigeria”.
"Siqala iprojekthi ngesiqendu se-13 sivelisa amanqanaba ahlukeneyo kwimveliso bhanyabhanya. Oku kubandakanya ukhetho lwendawo, eya kusivumela ukuba sibonise iindawo ezahlukeneyo ezintle ezifumaneka eNigeria; ukhetho lwe-wardrobe oluya kubonisa ukhetho olunobutyebi kwishishini lefashoni yeli lizwe; ukhetho lwengoma yesandi oluya kugqamisa umculo wethu osisityebi; ukulahlwa okuza kubonisa iitalente zethu ezininzi kunye nenxalenye yezobuchwephesha eya kuthi ibonelele ngeqonga lokubonisa ukuba akukho khamera kunye nezinye izixhobo esingenazo apha.
"Njengenxalenye yeprojekthi, siza kuqhuba nenkqubo kwi-CNN ebonisa abantu baseNigeria abangama-20 ukuba babukele kolu Shishino. Abantu baseNigeria abazakuboniswa bazakukhethwa ngabadlali bemizi-mveliso ngokwabo ukuqinisekisa ubunyani, ”utshilo uMphathiswa.
Umphathiswa ukwathe intsebenziswano kathathu, kunye neeMoUs kunye neTony Elumelu Foundation, iBhanki yeShishini [i-BoI] kunye neBhunga laseBritane, beziyinxalenye yamalinge kaRhulumente wase-Federal wokuguqula i-Creative Industry ibe yi-Creative Economy. .
Ngokutsho kwakhe, “urhulumente akathandabuzi ukuba isicwangciso sokuguqula i-Creative Industry ibe yi-Creative Economy kufuneka siqhutywe ngamashishini abucala”.
U-Mohammed uthe iingxoxo ezivela kwi-Roundtable ziya kudla umsitho omkhulu, iNkomfa yeNkxaso-mali yoShishino lobuGcisa, ebekelwe uJulayi 17-18, kwi-Eko Hotel eLagos kwaye izakubhengezwa ivulwe ngu-Mongameli obambeleyo u-Osinbajo.
Uluhlu lweendawo ezivulwa kwakhona eBangkok ngenxa ...
Ndifuna usana: Ukuhamba ngenjongo!
Abantu abali-17 benzakele kuqhushumbo lwelori yaseLos Angeles